Recycling on Mars: From Old Packing Material to New Poop | Wire News
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Kudzokorodza paMars: Kubva Kare Packing Material kuenda kuNew Poop
HeroX, ipuratifomu inotungamira uye yakavhurika musika mhinduro kune vanhu vazhinji, nhasi yatanga makwikwi ekuunganidza vanhu, "Waste to Base Materials Challenge: Sustainable Reprocessing in Space". Mamisheni emangwana evanhu kuMars uye rwendo rwekudzoka kuPasi zvinotarisirwa kutora makore maviri kusvika matatu. Munguva iyi, huwandu hwakawanda hwemarara huchagadzirwa. HeroX iri kutsvaga nzira dzehunyanzvi dzekudzosera, kudzokorodza, uye kugadzirisazve tsvina inogadzirwa mubhodhi kuitira kuti mishoni irambe iripo.
Sezvo kurongeka kwezvikepe zvekutakura kutsigira Mars mishoni kwakaoma kwazvo, chitundumuseremusere chinofanirwa kunge chichishanda uye kuzviriritira sezvinobvira. Dambudziko iri nderekutsvaga nzira dzekushandura marara kuita zvigadziko uye zvimwe zvinhu zvinobatsira, senge propellant kana feedstock ye3D kudhinda. Dambudziko ndere kutsvaga mazano ako ekushandura nzizi dzakasiyana siyana kuita marara uye kuita zvinhu zvinobatsira izvo zvinozokwanisa kugadzirwa kuita zvinhu zvinodiwa uye kutenderera kakawanda. Nepo kutenderera kwakanyatso shanda kusingaite, mhinduro dzakakodzera dzinozokonzeresa kutambisa kushoma. NASA inogona kupedzisira yabatanidza maitiro ese akasiyana mune yakasimba ecosystem inobvumira spacecraft kutangisa kubva kuPasi nehuremu hwakaderera.
Dambudziko: NASA's Waste to Base Equipment Challenge inobvunza nharaunda yakakura kuti ipe nzira dzekutanga dzekugadzirisa marara uye shanduko mumapoka mana chaiwo:
• tsvina yetsvina
• Foam kurongedza zvinhu
• Carbon dioxide processing
Mubairo: Vakundi vakawanda muchikamu chimwe nechimwe vachapihwa mubairo we $1,000. Pamusoro pezvo, vatongi vanozoona mazano mana se "akanakisa mukirasi," imwe neimwe iine mubairo we $ 1,000. Chikwama chemubairo we $24,000 chichapihwa.
Kukodzera Kukwikwidza uye Kuhwina Mubairo (s): Mubairo wakavhurika kune chero ane makore 18 kana kupfuura anotora chikamu semunhu kana sechikwata. Mumwe nemumwe anokwikwidza uye zvikwata zvinogona kubva kune chero nyika, chero bedzi United States federal zvirango zvisingarambidze kutora chikamu (zvimwe zvinorambidzwa zvinoshanda).
Individual NASA Recycling nyika dzakabatana
Inishuwarenzi yekutanga pasi rose yekuvhiya netsaona...
Chii chaunofanirwa kuziva usati watenga mota nyowani yeMagetsi ...
Nyowani FDA-yakacheneswa isina waya yekubatwa yekuona sensor